Darron Meyer – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Deep Blue Sea2(2018) Unicode ငါးမနျးတဈကောငျကို လူအသိဉာဏျလိုမြိုးအရာတှထေညျ့သှငျးပေးလိုကျတဲ့အခါ ဘယျလိုအကြိုးဆကျတှရေလာမလဲဆိုတာကွညျ့လိုကျရအောငျလား…ငါးမနျးဆိုတာမြိုးကရဘေုရငျလို့တငျစားလို့ရတဲ့အသားစားသတ်တဝါတှပေါ…ဒီလိုအကောငျမြိုးတှကေို လူတှရေဲ့သုတသေနအဖွဈရှေးခယျြလိုကျတယျဆိုတာကတော့တျောတျောကိုအန်တရာယျမြားတဲ့စှနျ့စားမှု့တဈခုပါပဲ…ဒါပမေယျ့ စူးစမျးခငျြတာကလညျးလူတှရေဲ့သဘာဝမဟုတျပဘေူးလား…ဒါကွောငျ့ ငါးမနျးတှကေိုမှေးမွူပွီးအဖှဲ့လိုကျအမဲလိုကျတတျအောငျသငျပေးကွပါတယျ…ငါးမနျးဆိုတာမြိုးကတဈကောငျတညျး အစာရှာတတျတဲ့အမြိုးတှပေါ… ဒီလို အရိုငျးစိုငျးကောငျတှကေို အဖှဲ့လိုကျအမဲလိုကျတတျအောငျသငျပေးတာကလညျးတျောတျောကိုမလှယျသလို အရမျးလညျးအန်တရာယျမြားတဲ့အလုပျပါ….ဒီလိုတိုးတကျလာတဲ့ ငါးမနျးတှကေို လူသားတဈယောကျလိုတှေးချေါနိုငျအောငျလုပျပေးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့လူတှကေ အမဲလိုကျလို့သငျပေးလိုကျတဲ့ သူတို့ရဲ့ငါးမနျးတှကေသူတို့ကိုပွနျပွီးတော့ အမဲလိုကျကွပါတော့တယျ…အဲလိုအမဲလိုကျကွတဲ့အခါမှာတော့ ပငျလယျပွငျရအေောကျစခနျးမှာပိတျမိနကွေမယျ့ လူသားတဈစုရဲ့ အသကျရှငျလှုပျရှားမှု့တှကေိုစိတျလှုပျရှားကွောကျလနျ့ဖှယျမွငျရမှာပဲဖွဈပါတယျ… Review Credit Zawgyi ငါးမန်းတစ်ကောင်ကို လူအသိဉာဏ်လိုမျိုးအရာတွေထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရလာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်လား…ငါးမန်းဆိုတာမျိုးကရေဘုရင်လို့တင်စားလို့ရတဲ့အသားစားသတ္တဝါတွေပါ…ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကို လူတွေရဲ့သုတေသနအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့စွန့်စားမှု့တစ်ခုပါပဲ…ဒါပေမယ့် စူးစမ်းချင်တာကလည်းလူတွေရဲ့သဘာဝမဟုတ်ပေဘူးလား…ဒါကြောင့် ငါးမန်းတွေကိုမွေးမြူပြီးအဖွဲ့လိုက်အမဲလိုက်တတ်အောင်သင်ပေးကြပါတယ်…ငါးမန်းဆိုတာမျိုးကတစ်ကောင်တည်း အစာရှာတတ်တဲ့အမျိုးတွေပါ… ဒီလို အရိုင်းစိုင်းကောင်တွေကို အဖွဲ့လိုက်အမဲလိုက်တတ်အောင်သင်ပေးတာကလည်းတော်တော်ကိုမလွယ်သလို အရမ်းလည်းအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ပါ….ဒီလိုတိုးတက်လာတဲ့ ငါးမန်းတွေကို လူသားတစ်ယောက်လိုတွေးခေါ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေက အမဲလိုက်လို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတို့ရဲ့ငါးမန်းတွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ အမဲလိုက်ကြပါတော့တယ်…အဲလိုအမဲလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ပင်လယ်ပြင်ရေအောက်စခန်းမှာပိတ်မိနေကြမယ့် လူသားတစ်စုရဲ့ အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှု့တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားကြောက်လန့်ဖွယ်မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… Review Credit
IMDB: 3.3/10 3,960 votes
Seal Team Eight: Behind Enemy Lines (2014) Unicode အာဖရိမှာရှိတဲ့ ကှနျဂိုကို လြှိ့ဝှကျစဈဆငျရေး သှားရောကျတဲ့ အဖှဲ့ငယျ Seal Team Eight ရဲ့ စှနျ့စားရဲတဲ့ တိုကျပှဲတှအေကွောငျး ဇာတျကူးထားတာပါ. Action စဈသားနှဈသကျသူတှအေကွိုကျတှမေဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ Zawgyi အာဖရိမှာရှိတဲ့ ကွန်ဂိုကို လျှိ့ဝှက်စစ်ဆင်ရေး သွားရောက်တဲ့ အဖွဲ့ငယ် Seal Team Eight ရဲ့ စွန့်စားရဲတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအကြောင်း ဇာတ်ကူးထားတာပါ. Action စစ်သားနှစ်သက်သူတွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်
IMDB: 4.6/10 2793 votes